कसरी लिक भयो प्रधानमन्त्री र पूर्व लडाकुको फोन संवाद लिक ? – Satyapati
जनमुक्ति सेनाप्रतिको मोह
कसरी लिक भयो प्रधानमन्त्री र पूर्व लडाकुको फोन संवाद लिक ?
काठमाडौं । राजनीति कति अनैतिक हुन्छ भन्ने बुझ्न अहिले बालुवाटारतिर हेरे पुग्छ । कुनैबेला जनयुद्ध, माओवादी पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताको नामसम्म सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुलाई कसरी आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने भन्नेमा छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सचिवालयका मान्छेलाई दिनहुँजस्तो लडाकुहरुसँग भेटघाट, कुराकानी र फोन गर्न भ्याईनभ्याई छ । दौडधुप यतिसम्म कि, केही समयअघिसम्म नमस्कारसमेत नफर्काउने ती मान्छे अहिले आफैं फोन गरेर भेट्न बोलाइरहेका हुन्छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनाका एक लडाकुले भने, ‘गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको थियो, मैले वास्ता गरिन ।’
त्यतिमात्र हो र प्रधानमन्त्री स्वयंले पूर्व लडाकुका नेताहरुसँग गरेका फोन संवाद छरपष्ट छ । कहिल्यै माओवादी जनयुद्धप्रति सकारात्मक नबनेका ओलीलाई एकाएक किन जनमुक्ति सेनाप्रतिको मोह बढेको होला ? ती पूर्व लडाकु भन्छन्, ‘यो कुनै मोह हैन, पार्टी विभाजनपछि पनि आफूलाई पूर्वजनमुक्ति सेनाको साथ छ भन्ने देखाउन अपनाइएको फण्डा मात्र हो ।’
ती पूर्व लडाकु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर पार्टी फुटाएपछि उहाँ कमजोर हुनुभयो, त्यसैले जसरी पनि पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई आफूतिर तान्ने उहाँको अघोषित अभियान हो भन्दा हुन्छ ।’ पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुलाई आफूतिर तान्ने र प्रचण्डमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्ने रणनीति बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैले उनी पूर्वलडाकुहरुलाई फोन गरेर आफूतिर आउन आग्रह गरिरहेका छन् । पूर्व बाल लडाकुले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानी बालुवाटारकै योजनामा बाहिर ल्याइएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार बालुवाटार आफैँले उक्त अडियो सार्वजनिक गरेको हो । ठूलो संख्यामा पूर्वलडाकु भित्र्याउने योजना असफल भएको छ ।
उक्त योजना असफल भएपछि अझै पनि छलफल भैरहेको सन्देश दिन यस्तो गरिएको स्रोतको भनाइ छ । जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले नै सुनियोजित ढंगले अडियो बाहिर ल्याइएको भन्नुले पनि बालुवाटारबाट यस्तो हर्कत भएको बुझ्न कठिन छैन । उक्त अडियोमा प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व बाल लडाकु, अयोग्य लडाकुका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापाले गरेको कुराकानी छ ।
तीन मिनेट ४१ सेकेण्डसम्म भएको कुराकानीमा राजनले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन्, ‘अहिले जे निर्णय लिनुभयो, त्यसप्रति हाम्रो संगठनको तर्फबाट सकारात्मक समर्थन छ । यो निर्णय देशको हितका निम्ति छ । त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद भन्नुभएको छ ।’ देशभर ४ हजार ८ जना अयोग्य पूर्वलडाकु रहेको भन्दै उनले आफूहरुका निम्ति केही गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीले ‘अयोग्य लडाकु’ भन्ने शव्द सुन्नासाथ आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले ‘अयोग्य लडाकु भनेको लडाकुका निम्ति अयोग्य,अयोग्य लडाकु भनेको होइन । लडाकु भनेर उनीहरुले (माओवादी नेतृत्व) लडाकु भनेर जे पेश गरे, त्यो क्याटेगोरीमा मिलेन भनेको मात्रै हो । लडाकु भनिएको तर साँचो नठहरिएको मात्रै हो ।’
थापाले भने प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानी निकै सकारात्मक भएको तर अडियो लिक किन र कसरी भयो भन्ने कुराले अचम्म पारेको बताएका छन् । ‘यो सुनियोजित ढंगले अडियो बाहिर लिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको फोन संवाद लिक भएकोप्रति अनभिज्ञ छु । लिक भए पनि हामीले उठाउँदै आएको मुद्दालाई सहयोग पुगेको छ’, उनले भनेका छन् ।